जाडोमा निमोनियाबाट कसरी बच्ने ? अपनाउनुहोस् यी ५ घरेलु उपाय ! - VON TV
जाडोमा निमोनियाबाट कसरी बच्ने ? अपनाउनुहोस् यी ५ घरेलु उपाय !
३० कार्तिक २०७६, शनिबार १७:३९ 156 ??? ???????
काठमाडौं । निमोनिया ब्याक्टेरिया र भाइरसका कारण फोक्सोमा हुने एक आम संक्रमण हो । यो फोक्सोसँग जोडिएको एक गम्भिर रोग पनि हो । निमोनिया हुँदा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, श्वास लिन गाह्रो हुने, छाती दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, वान्ता हुने, रिंगटा लाग्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् । यस गम्भिर रोगको संक्रमण भएमा तपाई चिकित्सक कहाँ पुग्न आवश्यक हुन्छ ।